ဆေးဝါးကမ္ဘာဘလော့ခ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးဆေးဝါးအကြောင်း သီးသန့်ဖော်ပြသော ဆိုက်တခုဖြစ်ပါသည်။ ဆေးဝါးအကြောင်း အသစ်တင်သမျှ သိရှိနိုင်ဖို့ Facebook fan pageတွင် like လုပ်ပါ။ ဆေးဝါးအကြောင်း မေးလိုသမျှ ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အောက်တွင် အဆင်သင့်မေးမြန်းနိုင်ရန် contact form ကို ထည့်ပေးထားပါသည်။ စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
viagra(sildenafil 50mg) အမျိုးသားအားဆေး
ဆရာ ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ကျတာ၂လ ရှိပါပီအသက်က၂၅ ပါအမျိုးသမီးနဲ့နေရတာ အခက်အခဲရှိနေပါတယ် ၃မိနစ်၎ မိနစ်လောက်တောင် မနေနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ် ဘယ် လိုဆေးမျိုးသုံးစွဲရင် အဆင်ပြေမလဲသိချင်ပါတယ် ငယ်ငယ် တုန်းကအာရုံကြောအားနည်းလို့ဆေးသောက်ခဲ့ဖူးပါတယ် အခုအလုပ်ကလည်းစာရင်းအင်းလုပ်ရာတယ် အဲဒါတွေနဲ့များဆိုင်ပါသလား? တစ်ချို့ဆိုဒ်တွေမှာ viagraအကြောင်းရေးထားတာတွေ့ပါတယ် သူ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးသိပါရစေ၀ယ် ချင်ရင်ဆေးလက်မှတ်လိုပါသလား??
Posted by ဒေါက်တာ အေးမင်းထူး at 1:41 AM 1 comment:
autoimmuneခုခံအားချင်းပြန်တိုက်တဲ့ရောဂါလို့ သတ်မှတ်ထားလို့ ခုခံအားကျဆင်းတဲ့၊ ခုခံအားကိုနှိမ်တဲ့ ဆေးတချို့ကို သုံးရတယ်။ leflunomide ဆိုတာ ဒီလိုဆေးမျိုးပါ။ DMARDsအမျိုးအစားမှာ ပါဝင်ပါတယ်။သူ့အာနိသင်က DNA ကို တားဆီးပေးတယ်။ ခုခံအားကျဆင်းစေတယ်။ RAရဲ့ လက္ခဏာတွေကို သက်သာစေဖို့၊ပိုမဆိုးစေဖို့ သုံးပါတယ်။အဆစ်ရောင်တာ၊ပျက်ဆီးတာကို တတ်နိုင်သမျှနည်းပါးစေဖို့ အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ်။ လေးဖကိနာအဆစ်မြစ်ရောင်ရောဂါကုတဲ့အခါ Leflunomideတမျိုးတည်း (သို့)တခြားဆေးတခုခု(methotrexate,prednisolone)နဲ့ ပေါင်းပေးနိုင်တယ်။
Posted by ဒေါက်တာ အေးမင်းထူး at 11:09 AM No comments:
သွေးနီဥဖြစ်စေတဲ့ဆေးတွေရှိပါသလား၊ဘယ်နှစ်မျိုးလောက် ရှိပါသလဲ၊ဒီကဆရာက သွေးနီဥထုတ်လုပ်တာ နည်းတာသွေးအားကောင်းဆေးသောက်ဖို့လိုတယ် ပြောလို့ပါ
သွေးနီဥ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို အားပေးတဲ့ erythropoietin stimulating agents (ESAs)လေးမျိုး ရှိမယ်။
-epoetin alfa (Eprex®, Johnson & Johnson),
-epoetin beta (Recormon®, Roche),
-darbepoetin (Aranesp®, Kyowa Hakko Kirin)
-methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (Mircera®, Roche)
Posted by ဒေါက်တာ အေးမင်းထူး at 10:10 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲဝင်လာတာ မကြာသေးဘူး။ Ranbaxy ကုမ္ပဏီရဲ့ product အသစ်ဖြစ်တယ်။ Alovaဆေးတစ်တောင့်မှာ Aloe Vera extract 25mg ပါဝင်တယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်အဆီအနှစ်က ထုတ်ယူပြီး ဆေးထုတ်ထားတယ်။ အသားအရေအတွက်သာမက အစာချေစနစ်အတွက်ပါ ကောင်းမွန်စေတယ်။ ဆေးထဲမှာ ဗီတာမင် ဒီက လွဲရင် တခြားဗီတာမင်ဓာတ်တွေ အများအပြားပါဝင်တယ်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ် ၂၂မျိုးအနက် အမျိုး၂၀ထိ ပါဝငိတယ်။ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ saponinဓာတ်ဆိုတာလည်း ပါဝင်သေးတယ်။ ဆာပိုနင်ဓာတ်ဆိုတာ ဘက်တီးရီးယား၊ဗိုင်းရပ်စ်၊ မှို၊တဆေးတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့အစွမ်း ရှိတယ်။
Posted by ဒေါက်တာ အေးမင်းထူး at 9:56 AM No comments:
Primolut N ရာသီသွေးကို ဆေးနဲ့ထိန်းခြင်း
ဆရာ ကျမသူငယ်ချင်းတယောက်က ရာသီသွေးကို သောက်ဆေးနဲ့ ထိန်းလို့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါဟုတ်ပါသလား။ အကယ်၍ အဲလိုလုပ်ရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိနိုင်ပါသလား။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ သားသမီးမရတာမျိုးတွေကော ဖြစ်လာနိုင်ပါ သလား။ ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ် ဆရာ။
ရာသီသွေးကို ဟော်မုန်းဆေးတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ရာသီသွေးပေါ်တယ်ဆိုတာလည်း ဟော်မုန်းတန်ခိုးကြောင့် ဖြစ်လို့ပါပဲ။ တခါတရံ ရာသီသွေးမပေါ်အောင် လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာ ဆေးနဲ့
ရက်ရွေ့ပေးနိုင်တယ်။ ဥပမာ ခရီးရက်ရှည်သွားရတာမျိုး၊မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမျိုးမှာ
Posted by ဒေါက်တာ အေးမင်းထူး at 9:46 AM No comments:
Vonstrel(Levonorgestrel 1.5mg) ဆေးတလုံးပါ အရေးပေါ်တားဆေး
တီထွင်ကြံဆမှုဆိုတာ ရပ်တန့်မနေဘဲ အစဉ်အမြဲ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတာ ဟုတ်တယ်။ အရင်က အရေးပေါ်တားဆေးတွေမှာ ဆေးနှစ်လုံးပါခဲ့တယ်။ ဒါလည်း သုံးစွဲသူတွေကအလုပ်ရှုပ်တယ်။ အဆင်မပြေဘူး။ ၁၂နာရီခြား နောက်တလုံး ထပ်သောက်နေရတာ မေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆ်ိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိတယ်။ ဒါမျိုးမသောက်ချင်ဘူး ဆိုတာတွေ တွေ့ရတယ်။ ဒီတော့ သုံးစွဲသူအကြိုက်ဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်သူတွေက ထပ်ထုတ်ရပြန်ရော။ vonstrel ဆိုတဲ့ဆေးက အလုပ်ရှုပ်မခံချင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ပိုသင့်တော်တယ်ဆိုရမယ်။တကြိမ်ထဲသောက်နိုင်ဖို့ လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင် ဆေးတလုံးထဲကိုပဲ ထည့်သွင်းထားတယ်။
Posted by ဒေါက်တာ အေးမင်းထူး at 8:30 AM No comments:
protinet ဆိုတာ ပရိုတင်း အသားဓာတ် အားဆေးတမျိုးဖြစ်တယ်။ ပိုတိကျအောင်ပြောရင် အမိုင်နိုအက်ဆစ် ဖြစ်တယ်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဆိုတာ ပရိုတင်းဓာတ်ရဲ့ အခြေခံအုပ်မြစ် ဖြစ်တယ်။ ဆဲလ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အက်တမ်နဲ့တူတယ်။ အက်တမ်တွေပေါင်းစပ်ပြီးမှ ဆဲလ်တခုဖြစ်ရတယ်။ အဲလိုပဲ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေ စုပေါင်းပြီး ပရိုတင်းဆ်ုတာ ဖြစ်လာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ဖို့ ပရိုတင်းက အရေးကြီးတယ်။ တရားသဘော ရုပ်၊နာမ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရရင် ရုပ်ခန္ဓာကြီးက ပရိုတင်းတွေ ဖွဲ့စည်းပြီး ဖြစ်လာရတာပါ။ရုပ်ခန္ဓာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပရိုတင်းက အရေးပါတယ်။ ဒီအတွက် ပရိုတင်းအားဆေးဆိုတာတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။
Posted by ဒေါက်တာ အေးမင်းထူး at 8:27 AM No comments:
Oramin G ကိုရီးယားဂျင်ဆင်းအားဆေး
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသုံးများတဲ့ ဂျင်ဆင်းအားဆေးတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။Oramin-Gဆိုတာ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ဒေးဝန်း(Daewon) ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဂ...
Zytrim(orlistat 120) အဆီချပိန်ဆေး
Zytrim အဆီချပိန်ဆေးထဲမှာ orlistat 120mg ပါဝင်ပါတယ်။ အဆီချပိန်ဆေးထဲမှာ ဆရာဝန်လက်မှတ်မလိုပဲ ရရှိနိုင်တာ ဒီဆေးတမျိုးသာရှိတယ်။ ဆရာဝန်လက်မှ...
Betex(Vitamin B1,B6,B12) အာရုံကြောအားဆေး
ဆရာ Betexဆေးက ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်၊ ဇက်ကျောတက် ပျောက်ကင်းပါစေသလား ရေရှည်သောက်ရင်ကော အစာအိမ်ထိခိုက်နိုင်ပါသလား ဆရာဝန်နဲ့သွားပြတော့ ဒီ...
Regro 5% spray(minoxidil 5%) ဆံပင်ပေါက်ဆေး
Regro 5%ထဲမှာ minoxidil ဆံပင်ပေါက်ဆေး တမျိုးပါဝင်ပါတယ်။ ဒီbrandမှာ 3%နဲ့ 5%ဆိုပြီး နှစ်မျိုးလာတယ်။ spray ဖြန်းဆေးပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ 60ml...
ဆရာ ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ကျတာ၂လ ရှိပါပီအသက်က၂၅ ပါအမျိုးသမီးနဲ့နေရတာ အခက်အခဲရှိနေပါတယ် ၃မိနစ်၎ မိနစ်လောက်တောင် မနေနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ် ဘယ် လို...
Obestat(orlistat 120mg) အဆီချပိန်ဆေး တစ်မျိုး
Obestatဆိုတာ အဆီချပိန်ဆေးတစ်မျိုးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာ အဆီချပိန်ဆေးတွေ မနည်းမနော ရှိကြတယ်။ ဆင်တူရိုးမားနာမည်တွေနဲ့ ခေါင်းရှုပ်စရာပ...
ဒေါက်တာခင်ဗျား နေ့စွဲ။ ၂၄၊၁၁၊၂၀၁၃ (တနင်္ဂနွေနေ့) ကျွန်တော့တွင် ပူးတွဲပါ ဓာတ်ပုံထဲမှ အတိုင်းယားနာများ ပေါက်နေပါသဖြင့် မည်သို့ ကာကွယ်၍ ...
64st, between 37st& 38st, Mahar Aung Myay, Mandalay.
Tel : 09 402588148, 09 792021231
ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးဝါးအကြောင်း dr.ayeminhtoo@gmail.comသို့ တိုက်ရိုက် မေးလ်ပို့မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှတဆင့် ဝင်ရောက် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Contact Form(မေးမြန်းလိုသော အကြောင်းအရာကို အောက်တွင်ဖြည့်၍ အလွယ်တကူမေးမြန်းနိုင်ပါသည်)
Acne medicine ဝက်ခြံပျောက်နည်း
Acnotin(Isotretinoin 10 mg) ဝက်ခြံပျောက်ဆေး
Adoxy Cellfood ရေဆေးမှ လေဆေးသို့
Alcoliv(Metadoxine 500mg) အရက်ကြောင့် ခက်နေတဲ့အသည်း
Aminoglycosides ဗက်တီးရီးယား ပိုးသတ်ဆေး
Anti-pruritus medicine ယားနာပျောက်ဆေး
Antihypertensive drugs သွေးကျဆေးအမျိုးမျိုး
Aqua tears eye drop မျက်လုံးထဲက အရည်တွေ ခမ်းခြောက်နေလို့
Arcalion(sulbutiamine 200mg)အင်အားလည်းပြည့်စေ မှတ်ဥာဏ်လည်းကောင်းစေ
Artificial sweetener သကြားအစားထိုး ဆေးအမျိုးမျိုး
Avamigran ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာ အမြန်ဆုံးသက်သာ
BRAND's chicken ဘရင်းကြက်ပေါင်း ဘာတွေကောင်း
Bioflor အရည်ဝမ်းတွေ သွားတဲ့အခါ
Biogesic(Paracetamol) ဘိုင်အိုဂျက်ဆစ် အဖျားကျဆေး
Bowel-Safe capsule ပရိုဘိုင်အောတစ် ဆေးတောင့်
Calorie ကယ်လိုရီနဲ့ အင်နာဂျီ
Carnitab(levocarnitine 330mg)နာတာရှည် နုံးချိသူတို့အတွက်
Chloramphenicol ကလိုရမ် ဖီနီကော ပိုးသတ်ဆေး
Chromdiet အမျှင်အားဖြည့် ပိန်ဆေးဓာတ်စာ
Contraceptive patch တားဆေးကပ်ခွာ ပေါ်ပြူလာမဖြစ်
Cough medicine ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ
Cough remedies ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက် အိမ်သုံးနည်းများ
Coversyl plus နှင့်FENO-TG ဆေးနှစ်မျိုး
DANOCIL(danazol 200mg) သားအိမ်ကြောင့် ရာသီသွေးများရင်
Dextrosin ချောင်းဆိုးကင်းစင် ဒက်စ်ထရိုစင်
Drugs for burning sensation of urine ဆီးပူပျောက်ဆေး
Duovir အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးကူးစက်ခံရရင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
Dynetic(itopride 50mg) အူလမ်းကြောင်းတွေ ကောင်းပါစေ
Enervon-C ရေရှည်စွဲမသောက်သင့်တဲ့ အားဆေး
Eve 500 ဆည်းဆာခင်းနှင်းဆီ
Exluton လေးဆယ်အရွယ် ကလေးတားမယ်
Figger Gel အချိုးကျကျ၊လှပစေမယ့် အဆီကျလိမ်းဆေး
Filfresh(Melatonin 3mg) သဘာဝအိပ်ဆေး
Food and nutritional value အစားအသောက် အာဟာရတန်ဖိုးများ
G Trim လက်ဖက်စိမ်းပါဝင်တဲ့ သံပုရာရနံ့ဖျော်ရည်နဲ့ အဆီချမယ်
GNC Mega Teen(dietary supplement) ဆေးသောက်ရင် အရပ်ရှည်မှာလား
Genital wart cream ကြွက်နို့လိမ်းဆေး
Glotamin-C အင်နာဗွန်-စီလို အားဆေး တစ်မျိုး
Glycopeptides ဂလိုက်ကို ပက်တိုက်
Gout medicine ဂေါက်ဆေးအမျိုးမျိုး
HGh injection အရပ်ရှည်ဆေး ထိုးခြင်း
Herpes vaccine ရေယုန်ကာကွယ်ဆေး
Hot and cold treatment အပူနဲ့အအေး ကုသနည်း
Hovid Q10 plus နှလုံးအားဆေး
Kinohimitsu collagen men drinkအမျိုးသားများအတွက် ကိုလာဂျင်သောက်ဆေးရည်
Kinohimitsu detox juice အဆိပ်အတောက် ကင်းစင်၊ အသားအလှပိုင်ရှင်
Kremil-S အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ခြင်းအတွက် ပန်းရောင်ဆေး
Li Shou Slimming Capsule တရုတ်ပိန်ဆေး
Liv 52(Liver detox supplement) အာယုဗေဒ အသည်းအားဆေး
Livolin ဖေ့စ်ဘွတ်ကမေး အသည်းအားဆေး
Lobese(Phaseolus Vulgaris Extract)စားချင်တာစား ဝိတ်မတက်စေရ
MFMPနဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းထဲမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆေးဝါးအကြောင်း စုံလင်စွာဖတ်ရှုမယ်
Marvelon 28 ၂၈ရက် ကိုယ်ဝန်တားဆေးကဒ်
Medicine for eye power မျက်စိပါဝါ ဆေးနဲ့ချခြင်း
Medicine world interview ဆေးဝါးကမ္ဘာနှင့် ခဏတာ
Menaril(betahistine 8mg) နားအူနေလို့
Metronidazole မက်ထရို ပိုးသတ်ဆေး
Nasal inhaler ရှူဆေး(သို့)လေဆေးပေးခြင်း
Nat B ဗီတာမင်ဘီ အာရုံကြောဆေး
Nosic(doxylamine,pyridoxine) ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အန်ရင်
Omega3အိုမီဂါသရီး
Omez insta ရင်ပူတာတွေ ချက်ချင်းသက်သာ အိုမက်ဇ်-အင်စတာ
Optium(Calcium dobesilate 500mg) လိပ်ခေါင်းအတွက်
Orlifit (orlistat 120) အဆီချပိန်ဆေး နောက်တစ်မျိုး
OrsL drink ဓာတ်ဆားဖျော်ရည် သောက်ကြမလား
Penicillin ပင်နယ်စလင် ပိုးသတ်ဆေး
Pentaxim ရောဂါငါးမျိုးအတွက် ကာကွယ်ဆေး
Prokind (Propantheline 15 mg) အူလမ်းကြောင်းရောဂါအတွက်
Protectone ပရိုတင်းအပြင် အင်နာဂျီ ပြည့်ဝစေမည်
Purifen 300 (dexibuprofen 300mg)အဆစ်အမြစ်ကိုက်ပျောက်ဆေးတမျိုး
Quinolone အူလမ်းကြောင်း ပိုးသတ်ဆေး
RABLET- D အစာအိမ် အအန်ပျောက်ဆေး
Riconia tab မိုက်ခရိုနျူးထရိယန့်ပါ ထပ်ပေါင်း အားဖြည့်ပေးမယ့် အားဆေးမျိုး
Rotaforte သွားနဲ့သွားဖုံးရောဂါအတွက် ရိုတာ-ဖို့
Scabo(Ivermectin 6mg) ဝဲသံသရာ ကင်းဝေးပါစေ
Shu Di patch ဆူဒီနားကပ် ကားမူးသက်သာ
Slimmax 10(sibutramine 10mg)တားမြစ်ထားတဲ့ ပိန်ဆေး
Sorbitol STADA powder ဝမ်းနုတ်ဆေး အမှုန့်ထုပ်
Stuttering medicine စကားထစ်သူအတွက် သောက်ဆေး
Tocovid supraBio လေဖြတ်ခြင်းအတွက်
Turmeric တိုင်းရင်း နနွင်း
V-melatonin အိပ်ဆေးမှ အိပ်ဆေး တမေးထဲမေးနေသူတွေအတွက်
Vaxigrip နှစ်စဉ်ထိုးပေး တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ဆေး
Xenical(orlistat 120mg) original အဆီချ ပိန်ဆေး
Zifam probiotic အသစ်ဝင်လာတဲ့ probiotic ဆေးတစ်မျိုး
Baby tonic ကလေးဝအောင်တိုက်တဲ့အားဆေး
Bleeding after sexual intercourse လိင်ဆက်ဆံပြီး သွေးဆင်းခြင်း
Diagnosis and advice အဖေ့အတွက် စိုးရိမ်လို့
Disease diagnosis ရောဂါဗေဒင်ဖတ်ခြင်း
Food for bronchitis အဆုတ်ရောင်ရင် ဘာတွေရှောင်မလဲ
Foot and fat ခြေသလုံးအဆီကျအောင်
Foot pain ခြေထောက်နာ သက်သာဖို့
Hot rash အပူဖုပျောက်တဲ့ဆေးနည်း
Leucorrhoea အဖြူဆင်းလို့ ဆေးသောက်ရင်
Medicine for rash အနီစက်ပျောက်တဲ့ ဆေးနည်း
Milia ပုလဲသွယ်သေးသေး အဖုလေးတွေ
Myanmar health service မြန်မာ့ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း
Omez-D SRနဲ့ Omez insta ဆေးဝါးသစ် မိတ်ဆက်ပွဲ
Opoid analgesic ဘိန်းပါတဲ့ဆေး သတိပေးပါရစေ
Sleep apnoea and snoring ရောဂါနဲ့ ဟောက်တာ
Slimming pill and amenorrhoea ပိန်ဆေးသောက်ပြီး ရာသီထိန်သွားလို့
Slimming pills taking method အဆီကျဆေးသောက်နည်း
Spondylosis ကြီးမှပေါင်းတဲ့ ရောဂါ
Swelling injury ဖုယောင်ဒဏ်ရာ ကျပ်ပူတိုက်မလား
Syringoma အောက်မျက်ခမ်းက အဖုလေးတွေ ပျောက်အောင်
Thyroid and food သိုင်းရွိုက်ရောဂါနဲ့ ဓာတ်စာ
Timetable လူနာကြည့်ချိန်များ သတ်မှတ်လိုက်ခြင်း